भिवालदी, ब्राउजर जुन मेट्रो इन्टरफेसको साथ ओपेरा बन्न चाहन्छ लिनक्सबाट
भिवालदी, ब्राउजर जुन मेट्रो इन्टरफेसको साथ ओपेरा बन्न चाहन्छ
अलेक्ज्याण्डर (उर्फ KZKG ^ Gaara) | | aPLICACIONES
1 भिवालदी भनेको के हो?
2 त्यसोभए भिवालदीले हामीलाई के ल्याउँछ?
3 भिवालदी पाउनुहोस्
भिवालदी भनेको के हो?
एक साथीले मलाई भर्खर परिचय गरे Vivaldi, अझै अर्को ब्राउजर जुन खालि भर्न कोशिश गर्दै जन्म भएको थियो ओपेरा धेरै प्रयोगकर्ताहरू छोडियो, तर पछिल्लो जस्तो यो बाहेक अरू केहि पनि छैन गुगल क्रोम नयाँ प्रकार्यहरूसँग। वास्तवमा यो Google क्रोम हो, यदि हामी जाँदै छौं भने इनबक्स हामी देख्नेछौं कि हामी कुनै समस्या बिना लगईन गर्न सक्छौं।
तर म त्यस्तो कडा हुन चाहन्न। सबैभन्दा पहिले, म यसलाई धेरै छोटो समयको लागि परीक्षण गर्दैछु, र यो सत्य हो कि यसमा केही चाखलाग्दो साना चीजहरू समावेश छन्, कम्तिमा भिजुअल रूपमा। तर हेरौं यस ब्राउजरको पछाडि कथा भनेको के हो त्यसका आफ्नै विकासकर्ताहरू अनुसार (वास्तवमा ओपेराको संस्थापकहरू मध्ये एक):
१ 1994 XNUMX In मा, दुई प्रोग्रामरहरूले वेब ब्राउजरमा काम गर्न शुरू गरे। हाम्रो विचार एक धेरै छिटो ब्राउजर बनाउनु थियो, सीमित हार्डवेयरको साथ काम गर्न सक्षम हुनु, यो मनमा राख्दै कि प्रयोगकर्ताहरू आफ्नै आवश्यकता र इच्छाहरू भएका व्यक्तिहरू हुन्। ओपेरा जन्म भएको थियो। हाम्रो सफ्टवेयरको सानो टुक्राले कर्षण प्राप्त गर्यो, हाम्रो समूह बढ्यो, र एक समुदाय सिर्जना गरियो। हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरू र हाम्रा जडाहरू नजिक थियौं। हामी हाम्रो सफ्टवेयरलाई सुधार गर्दैछौं, प्रयोगकर्ताहरूमाथिको हाम्रो प्रतिक्रियामा आधारित, साथ साथै एक उत्तम ब्राउजर कसरी बनाउने भन्ने बारे हाम्रो आफ्नै विचारहरू। हामी नवीनता र उत्कृष्टताको लागि प्रयास गर्दछौं।
२०१ 2015 मा अगाडि बढि, हामीले ब्राउजरलाई मन परायौं यद्यपि यसले दिशा परिवर्तन गरेको छ। दुर्भाग्यवस, यसले उपभोक्ता र योगदानकर्ताहरूको समुदायलाई सेवा गर्दछ जसले पहिले ब्राउजर निर्माण गर्न मद्दत गर्‍यो।
र त्यसैले हामी एक प्राकृतिक निष्कर्षमा पुग्छौं: हामीले नयाँ ब्राउजर बनाउनु पर्छ। हाम्रो लागि ब्राउजर र हाम्रा साथीहरूको लागि ब्राउजर। एक ब्राउजर जुन छिटो छ, तर साथै कार्यक्षमतामा धनी एक ब्राउजर, अत्यधिक लचिलो र प्रयोगकर्तालाई पहिले राख्दछ। एक ब्राउजर जुन तपाइँको लागि बनाईएको हो।
त्यसोभए भिवालदीले हामीलाई के ल्याउँछ?
हामीले हेर्ने पहिलो चीज भनेको एक इन्टरफेस हो जुन माइक्रोसफ्टको मेट्रो शैलीसँग एकदम नजिक छ, जसको मुख्य विशेषता यो हो कि (सक्रिय) ट्याबहरू हामीले भ्रमण गरिरहेको वेबसाइटको र adop्ग अपनाउँछ। धेरै राम्रो विवरण वास्तवमा।
को रूप मा लक्ष्य हराएको छ को पुन: प्राप्ति गर्न छ ओपेरा, एलिमेन्टहरूको लेआउट, वंश मेनू र ट्याबहरूको पूर्वावलोकन यसमा होभरि गर्दा, साथै अनुप्रयोग लोगोमा मुख्य मेनू। थप रूपमा, हामी पहिले जस्तै ट्याबहरूलाई समूहबद्ध गर्न सक्दछौं।
तर त्यहाँ अझै धेरै कामहरू बाँकी छन्, किनकी साइड प्यानल फंक्शनल छ, मेल अझै विकासमा छ, तर बाँकी चीजहरूले काम गर्दछन्: बुकमार्कहरू, नोटहरू, डाउनलोडहरू, आदि ... पुरानो संस्करणहरूमा जस्तै ओपेराको, प्यानल पूर्ण रूपमा लुकाउन सकिन्छ र स्पीड डायल पुरानो जस्तो देखिन्छ।
प्राथमिकता विन्डोसँग भिवल्डीको हालको संस्करणको लागि केवल सही विकल्पहरू छन्, र थोरै भिन्न विवरणहरू छन्। अवश्य पनि, यसले गुगल क्रोम प्राथमिकताहरूमा कुनै पनि कुराको प्रतिलिपि गर्दैन (यदि ओपेरा हालसालै गर्छ भने) र केहि बिन्दुमा यसको मौलिक चीजहरू हुन्छन्।
यद्यपि मैले यो लेख भिभल्डीबाट लेख्ने प्रयास गरें, ब्राउजरमा WordPress सँग समस्या छ किनकि जब म पूर्वावलोकन देख्ने गर्छु, प्रशासन प्यानल अर्को ट्याबमा लोड हुन्छ र पूर्वावलोकन नै होइन। तर मैले भनें, यो अझै विकासको शुरुको चरणमै छ, त्यसैले हामी यसको विकासको बारे सचेत हुनुपर्दछ।
भिवालदी उपलब्ध छ तपाइँको वेबसाइट बाट सबै प्लेटफर्महरूको लागि (विन्डोज, म्याक र लिनक्स) पछिल्लो केसमा डेबियन र रेडह्याटको लागि प्याकेजहरू। यदि हामी आर्चलिनक्स प्रयोग गर्छौं भने हामी यसलाई AUR मार्फत स्थापना गर्न सक्छौं:
तर हो, केवल 64 XNUMX बिट्सको लागि जुन मैले देखें।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » भिवालदी, ब्राउजर जुन मेट्रो इन्टरफेसको साथ ओपेरा बन्न चाहन्छ
धेरै राम्रो छ, तर म इन्जिनको रूपमा वेबकिट मन पराउँदिन, मलाई लाग्छ यो एकाधिकारमा जान्छ -
eliotime 3000 भन्यो
वेबकिटलाई ब्ल्इंक भनिने गुगल फोर्कले पहिले नै पिटेको छ (एउटा ओपेराले हाल १ 14 संस्करण देखा परेकोले प्रयोग गर्दछ)।
Eliotime3000 लाई जवाफ दिनुहोस्
तर झिम्का क्रोमका लागि अनुकूलित वेबकिटको मात्र एक संस्करण हो। अझै पलक पलक / वेबकिट एकाधिकार
Guguillox लाई जवाफ दिनुहोस्
Jhoed भेडा भन्यो
अहिले सम्म म फायरफक्सले प्रत्येक ट्याबलाई बिभिन्न प्रक्रियामा विभाजन गर्ने आशा गर्दछ जस्तै वेबकिट गर्दछ फायरफक्स <3।
Jhoed राम लाई जवाफ दिनुहोस्
आशा छ कि आक्रोश कहिल्यै हुँदैन।
Joaco लाई जवाफ दिनुहोस्
वास्तवमा यो गर्दछ। https://wiki.mozilla.org/Electrolysis मलाई के थाहा छैन यदि यो हालको संस्करणमा सक्रिय हुन सक्छ किनकि यो अझै परीक्षणमा छ।
फायरफक्स अझै ब्ल्इंक वा वेबकिटमा सारिएको छैन किनकि डब्ल्यू C सी द्वारा अनुमोदित मापदण्डहरूको साथ वेब पृष्ठहरू प्रदर्शन गर्ने बेलामा गेको रेन्डरिंग इञ्जिन अझै यसको मागको लागि छ।
म लिंक पढ्छु, तर मलाई लाग्दैन कि म यो के भन्छु बुझ्छु, किनकि मलाई यस्तो लाग्छ कि यसले केवल एक प्रक्रिया प्रयोग गर्दछ।
आशा छ यो कहिले पनि हुँदैन! .. त्यो मलाई फायरफक्सको बारे मनपर्दछ! धेरै धेरै प्रक्रियाहरू पाउनु कत्ति राम्रो छैन!
मैले यसलाई प्रयास गरे, र यो राम्रो देखिन्छ, यदि केही अपरिपक्व, तर यो राम्रो हुनेछ। यसका साथै मैले ल्याटिन अमेरिकी स्पेनिशको समर्थनमा स्थापना गरें, तर यो भाषा परिवर्तन गर्न बाहिर आउँदैन।
अन्यथा, यो सुरु गर्न राम्रो छ।
Jorgicio लाई जवाफ दिनुहोस्
KaOS का लागि, यो KCP मा छ
स्पार्टन ईन्टरफेस अनुकरण गर्दै क्रोमियमको अर्को फोर्क? म ओपेरा ब्लींक २ with सँग राम्रोसँग टाँसिन्छु (कम्तिमा यसले आफ्नो स्रोत खपतलाई अधिकतम अनुकूलन गरीएको छ)।
मलाई ओपेराप्टिलियन लाग्छ, र मैले भिवाल्डीलाई माया गर्थे, तर यो अझै प्रारम्भिक चरणमा नै छ र असंगतिहरू भए पनि, जस्तै पुरानो प्रेस्टो र गुगलको बिरूद्ध यसको युद्ध, यसको अनुहार राम्रो छ ... हो, लोडि speed स्पीड लेइइइइइइइइआइआइआई, आई ओपेरा ११-१२ बाट यो समान "फीचर-समस्या" हो भनेर सोच्न चाहनुहुन्छ जहाँ पूर्वनिर्धारित रूपमा यसले यो पूरा गर्न को लागी सम्पूर्ण पृष्ठ लोड गर्न अपेक्षा गर्दछ।
त्यो अबको लागि ... तिनीहरूले ख्याल राख्छन्
कसैले मलाई स्पेनिशको लागि समर्थन दिन्छ?
कसैलाई कसरी फ्रीस्ड इनस्टल गर्ने बारे थाहा हुन्छ? धन्यवाद 🙂
उबुन्टु १..१० यूटोपिक युनिकोर्न स्थापना गरेपछि के गर्ने
प्लाज्मा .5.2.२ उपलब्ध छ, नयाँ के हुन्छ हेरौं [अपडेट गरिएको]